Fianakaviana Iray Ve Ny GV? · Global Voices teny Malagasy
Fianakaviana Iray Ve Ny GV?
Voadika ny 30 Jona 2019 17:09 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Janoary 2015)
Ny GV no fikambanana iray anisany tena tsy mampino sy tena tsy mihafahafa indrindra amin'izay fantatro hatramin'izao. Sivy taona lasa izay, izaho, amin'ny maha blaogera Taiwanese sady mpianatra manana diploma amin'ny media ahy, isanandro aho no nitaraina momba ireo media mahazatra noho ny fanehoana ratsy ataon'izy ireo an'izao tontolo izao ary tena sorena. Rehefa fantatro ny GV sy izay nataon'ny GV, dia tena hoe “ity no izy!”
.Nanomboka nandika ny GV ho amin'ny teny sinoa aho ary namorona ara-bakiteny tranonkala copycat iray ho GV amin'ny teny sinoa. Eny ekena, taty aoriana kely, nivadika ho tetikasa iray goavana antsoina hoe Lingua ilay tranonkala nadika, saingy tsy avy amiko akory izany, fa satria efa vonona ny hanao azy ho tena izy ny GV. Tsy mora velively ho ana fikambanana tsy miankina iray ny mandray hevitra iray navoakana olona iray hafa izay tsy fantatrao akory, nefa notrohan'ny GV ilay izy ary navaoziny ho tsara kokoa sy tamin'ny fomba haingana be. Tsaroako foana fa nampiaiky volana ny firesahana momba ny fiasan'ny GV Sinoa natolotro nandritra ny fihaonambe antsika tany Delhi. Fa nitehaka ahy daholo ny rehetra rehefa niala ny sehatra aho ary tsy andrin'izy ireo mihitsy ny hamorona dika GV amin'ny fitenin'izy ireo manokana. Hatreo, ary hatramin'izao dia fianakaviana iray hafa ho ahy ireo mpikambana ato amin'ny GV, angamba fianakaviana mendrika indrindra noho ny fianakaviana niaviana, azoko lazaina izany.
Fony mbola talen'ny Lingua tao anatin'ny tarikay ny mpitantana aho dia tena tsotra be loatra sady tsy havanana tamin'io toerana io. Ny firongatr'ireo imailaka, ireo kolontsaina isankarazany ary ireo fahasamihafàna eo amin'ny samy mpiasa sy ny tsy fahaizako tsara manoratra ny teny Anglisy… Tsy nijanona ela teo amin'ny toerana aho. Mamiko hatrany ireo lesona izay azoko ary feno fankasitrahana an'ireo tonian-dahatsoratra hafa amin'ny Lingua aho izay niaraka sy nanampy ahy nandritra io fotoana io. Tena amin'ny foko izany. Satria ankehitriny, mitarika an'ireo startups manokana amin'ny media an-tambanjotra aho (latsaky ny NPO iray sy orinasa telo), lasa mpitantana tena matihanina sy tonian-dahatsoratra aho amin'ny orinasako manokana / media an-tambajotra. Mitarika ny ekipako sy mamaha an'ireo olana isankarazany amin'ny fomba tena haingana be no asa sahaniko isanandro. Noho izany, amin'izao fotoana izao, fantatro ny fomba hanaovana zavatra tsara kokoa.
Na izany aza, tsy manampotoana intsony ho an'ny GV aho. Manana marika goavana hatrany ny GV Sinoa, saingy tsy mbola mahatratra ny fahombiazana sy ireo fahaizamamorona ananan'ireo media vaovao an-tambajotra ao Taiwan. Miova be ny tontolon'ny media ary mitohy miova hatrany. Fantatro fa mety ho tsara kokoa sy hanana dindo ny GV Sinoa, ary fantatro ny atao, saingy tsy manam-potoana fotsiny aho. An-taonina ireo hevitra izay tiako ho andramana amin'ny GV Sinoa, ny sasantsasany tamin'izy ireo ihany koa dia efa noresahana taloha sy nandritra an'io fihaonambe io, nefa tsy novitaiko izy ireny. Tsy nataoko ho tena izy tahaka izay nataon'ny GV tamin'ny Lingua tena izy taona maro lasa izay.
Heveriko fa, rehefa mitohy mitombo ny GV, dia miova haingana bo koa ny tontolo. Tokony hanohy izay nataontsika nandritra ny ampolo taona maro ny ampahany amin'ny GV, izay mitazona ny soatoavintsika aminà fototra mafy, raha toa ny ampahany iray hafa kosa amin'ny GV tokony mila mihavao haingana dia haingana, mba tsy ho vaovao amin'ireo firehana farany, teknolojia eny fa na dia handeha lavitrakokoa any ambadik'izy ireo aza. Marobe amintsika no manatevina laharana ny GV satria tsy hoe fotsiny tsara ny GV, fa ihany koa satria hafa izy sady haingana ny fakàny an'ireo zava-baovao. Na izany aza anefa, fantatro, amin'ny maha fikambanana iray mifototra amin'ny resaka an-tsitrapo miasa manerana ny tany tahaka izany, tena tsy ho vita ny hitarika an'ireo ekipa rehetra mpikambana ato anatin'ny vondrontsika ho amin'ny zotra iray voafaritra, nefa isika raha miroso arakarak'ireo ampahany vitsivitsy, ho hafa kokoa no hitranga.
Nandritra ireo roa andro farany tamin'ny fivoriana anatiny, nandray anjara tamina adihevitra marobe niresahana lohahevitra mahaliana aho, anisan'izany ireo maodelinà fampidirambola isafidianana, ny fomba fiarahamiasa amin'ireo anjerimanontolo, ny famoronana ny votoatiny / torolalana, ny fametrahana fiarahamiasa iarahana firenena maromaro sy amin'ny samy faritra ary mba hanaovana zavatra miaraka amin'ireo fampiharana toy ny wunderlist sy ny slack ary ny hackpad. Heveriko fa marobe tamin'ireo lohahevitra ireo ihany koa no noresahina nandritra an'ireo fihaonambe hafa, ary isak'ireny fotoana ireny izahay dia nahazo fiheverana sy fankasitrahana foana. Tena tsara io, saingy ny tsy fahafahana mampiasa an'ireo hevitra dia tena tsy izy. Araka izany, hatomboko amin'ny GV Sinoa ary andramako ny manao zavatra amina tetidrefy kely kokoa. Ny GV x University no ho tetikasako voalohany, izay hihodina eo an-toerana ao Taiwan, avy eo ao Hong Kong, Japana ary Korea Atsimo. Ndeha andramantsika ny manao zavatra mizaka tena kokoa, mety hanana olana vitsivitsy izy ary mety ho tapatapaka ny zavatra rehetra (sahala amin'ireo tranonkala sasantsasany an'ny Lingua), nefa mino aho fa ny manomboka no zava-dehibe, ary raha mendrika izany, dia hohatsaraintsika hatrany hatrany.
[Sary: Sary an'ny mpampiasa Flickr sady mpaka sarin'ny GV, Laura Schneider CC BY NC 2.0]
Azia Afovoany sy Kaokazy 2 ora izay